“Hadda hala siiyo Liverpool koobka Premier League” – Macallin hore oo kubadda cagta ah – Gool FM
(England) 16 Okt 2019. Liverpool ayaa u muuqata inay ku socoto wadaddii ay ugu guuleysan laheyd horyaalka Premier League markii ugu horeysay tan iyo tan iyo 1990-kii.
Macalinkii hore kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Redknapp ayaa sharad ku galay in Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, isagoo tilmaamay inay haboon tahay haatan in Reds la gudoon siiyo koobka.
Reds ayaa hogaanka u heysa horyaalka Premier League, kaddib 8 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray xilli ciyaareedkan, waxayna 8 dhibcood nadiif ah ka sareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City.
Inkastoo 8 kulan oo kaliya laga ciyaaray Premier League, haddana Harry Redknapp ayaa wuxuu kalsooni weyn ka muujiyay in Liverpool ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan koobka horyaalka.
Haddaba Harry Redknapp ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Liverpool ayaa ku guuleysan doonta hanashada Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan”.
“Hala siiyo Liverpool koobka Premier League haatan, waxaan sharad ku galayaa inay ku guuleysan doonaan horyaalka, sidaas darteed xafiisyada sharadka waa inay lacagta i siiyaan anniga”.
“Haddii ay jirto hal koox aan doonayo inaan tababare u noqdo waa Liverpool aad ayaan u jeclahay”.
Waxaa xusid mudan in Liverpool kulankeeda soo aadan ee horyaalka Premier League ay la ciyaari doonto kooxda Manchester United Sabtida soo aadan, kaddib marka la soo gabagabeeyo kulamada caalamiga ah ee xulalka qaramada.